Yenza abasebenzi beMicrosoft kwiMicimbi
Kwamanye amasiko, abasebenzi basetyenziswa ukulawula amandla. Umfanekiso ngoRoberto A. Sanchez / E + / Getty Izithombe
Amapagan amaninzi asebenzisa abasebenzisa imilingo kwimikhosi kunye nemikhosi. Nangona akusikho into efunekayo yomlingo, inokufumaneka. Abasebenzi baxhomekeke ngamandla kunye negunya, kwaye kwezinye izithethe kuphela umPristi Omkhulu okanye uMbingeleli Omkhulu uhamba kunye. Kwezinye izithethe, nabani na onokuthi abe neyodwa. Ngokufana ne -wand , abasebenzi baqwalaselwa njengomqondiso wamandla wesilisa, kwaye ngokuqhelekileyo kusetyenziselwa ukumela umgangatho weMoya (nangona kwezinye izithethe, ufuzisela uMlilo ). Njengamanye amathuluzi emilingo , abasebenzi bayinto ongayenza ngayo, ngomgudu omncinci. Nantsi indlela.
Khetha Umthi Wakho
Khangela imithi yentonga evakalelwa ngokufanelekileyo kuwe, kwaye uyisebenzise ukwenza abasebenzi bakho bemilingo. Paolo Carnassale / Getty Izithombe
Ukuba ufumana ithuba lokuya kwinqanaba, ngelixa uphuma khona ujikeleze malunga nawe kufuneka uthathe ithuba lokukhangela iqela elincinci labasebenzi bemilingo. Eyona nto, uya kufuna ukufumana isiqwenga somthi esele siwe emthini - ungagqithanga isiqithi somthi esivela kumthi ophilileyo nje ngokuba ucinga ukuba uza kwenza abasebenzi abalungileyo.
Abasebenzi bemilingo ngokuqhelekileyo baninzi ngokwaneleyo ukuba unokubamba ngokukhululekile esandleni sakho, ngokuzenzekelayo, kwaye ubenomgca. Ubhedu bakho obufanelekileyo kukufumana ophakathi kokuphakama kwamagxa kunye nentloko yentloko yakho. Bamba intonga ukuze ubone indlela evakalelwa ngayo esandleni sakho - ukuba ixesha elide kakhulu, unako ukulihlalisa. Xa kuziwa ububanzi, kufuneka ukwazi ukugubungela ngeminwe yakho ngeenxa zonke. Ubungakanani obuya kumitha enye ukuya kweyesibili kukulungele abantu abaninzi, kodwa kwakhona, yibambe kwaye ubone indlela ezivakalelwa ngayo.
Abanye abantu bakhetha uhlobo oluthile lwenkuni olusekelwe kwiimpawu zalo zomlingo . Umzekelo, ukuba unomnqweno wokuba usebenze abasebenzi kunye namandla, ungakhetha oki. Omnye umntu unokukhetha ukusebenzisa uAsh esikhundleni, njengoko ihlanganiswe ngokuqinile kwimisebenzi yemilingo kunye nesiprofeto. Kodwa akukho myalelo okhuni kwaye okhawulezayo, nangona kunjalo, ukuba usebenzise uhlobo oluthile lwenkuni-abantu abaninzi benza abasebenzi ngaphandle kwentonga "abavakalelwa ngayo" kubo. Kwezinye iinkqubo zemilingo, kukholelwa ukuba umthi wesigxobhozo esithwalwe yiqhwithi sinegunya elikhulu lemilingo.
Ukuze ususe i-bark entanyeni yakho, ungasebenzisa isifeti (kungekhona i- athame yakho, kodwa isitya esiqhelekileyo) ukuhlula i-bark. Oku kuya kukunceda ukuba ujonge abasebenzi, ukuba kukho iintsilelo ezincinci kuwo, okanye ukususa amanqanaba angaphezu kwamagatsha. Ngezinye iintlobo zeenkuni, unokuba ufuna ukucwina abasebenzi ukwenzela ukuba i-bark ithambile, okwenza kube lula ukuyihlutha. Ezinye iintlobo zokhuni, ezifana nepineyini, zilula ngokukhawuleza ukuba zihluthe ikhefu ngesandla xa ukhetha.
Sebenzisa i-sandpaper ehlanjululwe ngokukhanya, okanye uboya bensimbi, ukuba unxweme ukhuni kuze kube lula.
Ukugqiba abasebenzi bakho
Emva kokuba ufumene umthi wakho wenziwe kwaye unesihlabathi, unokhetho oluninzi. Unokuba ufuna ukuphonsa imbobo encinane phezulu ukwenzela ukuba ungenise i-thong yesikhumba - oku kusebenza ngokukhawuleza ukuba usebenze abasebenzi bakho kwizithethe, ngenxa yokuba unokubeka i-thong ngekristal yakho kwaye unciphise amathuba okuba ngengozi ukuphosa abasebenzi bakho kwigumbi. Ukuba uthanda, unokuyihobisa ngokutyhila okanye ukutshisa izithethe zesiko lakho kuyo, ukongeza amakhristal okanye ubuhlalu, iintsiba, okanye ezinye iintlobo zintsimbi.
Ngokuqhelekileyo kungabonwa ukuba kuyimfuneko ukusebenzisa i-polyurethane ekugqibeleni kwabasebenzi, kwaye kwiingcali ezininzi kukholelwa ukuba ukusetyenziswa kokuqulunqwa kwemveliso kuya kuvimba amandla omlingo. Nangona kunjalo, abanye abantu bakhetha u-oyile abasebenzi ukuba banike ukukhanya okukhanyayo-ukuba wenza oku, sebenzisa ioli echongiweyo-esekelwe kwisityalo, kunokuba i-petroleum-based based.
Emva kokuba abasebenzi bakho bephelile, bawungcwalise njengokuba ungayiphi na enye itekisi.
Indlela yokuQalisa i-Iron Iron Cauldron
Ukusebenza Kwenkwenkwezi Kusebenza njani?
Konke Okufuneka Ukwazi Ngo-4WD
I-Kaaba eMecca: Igalari yeSithombe neefoto, imidwebo, imizekeliso kunye neMifanekiso